HeersareMuxumed: Sidii Aanu Isu Fahannay. Qalinkii: Cabdishakuur Heersare
Sidii Aanu Isu Fahannay. Qalinkii: Cabdishakuur Heersare
Markii aanu soogalnay waanu yara naxnay. Waayo? Waxa aanu ka soo baxnay shaqo oo waxa aanu rabnay in aanu nasanno oo bun iyo sharaab aanu cabno.
Mar keliya ayay indhahayagu qabteen saf arday ah oo dheegga isku haysa. Iska fadhiisannay. Waxa aanu u haysannaa markii ay ardaydu arkeen nimanka kamaradda sita ee soo galay inay aamuseen. In yar ka dib, ayaanu dareennay in arrinku sidii aanu moodaynnay aanu ahayn. Waxay indhahayagu qabteen ardaydii oo faraha ku sheekaysanaysa. Waxa aanu garwaaqsannay inay yihiin arday maqalka naafo ka ah.
Garannay inay arday yihiin. Ogaannay inay imtixaanka shaadiga ah ee socda ay ku jiraan oo kaadhadhkii aqoonsiga ayaa laabta u sudhnaa. Waxa nagu adkaatay in aanu si uun u weydiino inay imtixaanka wax nooga sheegaan ama ba ay noo sheegaan maaddada ay gelayaan.
Intii aanu is eegaynnay ayuu soo dhawaaday waqtigii ay imtixaanka gelayeen oo saacaddu waxay ku sii durkaysay 11kii maalinnimo. Xamse Cali Jeesto oo aanu wada soconnay ayaan ku qanciyey in aanu sawir xuxuus ah ka reebno ardayda. Waxa aanu gudagalnay in aanu u sheegno in aanu rabno sawir. Weliba sawir xusuus ah in aanu ka qaadno. Aniga ayaa faraha uga tilmaamay oo waxa aan u muujiyey astaanta sawirqaadista iyo in aanu rabno inaanu sawir ka qaadnayno. Markiiba mid ka mid ahaa ayaa faraha nooga sheegay diidmo culus. Weli annaga oo aan quusan ayaanu arday kale faraha uga yeedhnay. Waxa aanu ka codsannay inuu noo dhiibo buug uu sitay. Waxa aanu ugu qornay qoraal kooban oo sheegaya in aanu sawir xusuus ah ka qaadaynno. Muddo dhawr miridh ah ayay ku qaadatay inay ka doodaan soo jeedintii, iyaga oo faha ka sheekaysanayay. Waxa noo muuqatay in lagu kala qaybsamay codsigii aanu u gudbinnay. Go'aan hordhac ahaa oo nala siiyey ayaa diidmo na loogu muujiyey.
Waxa arrintii soo dhexgalay laba arday oo koonaha shishe fadhiyey. Markii ay qoraalkii akhriyeen ayay ogolaadeen oo ardaydii kalena ku qanciyeen. Sidaas ayay noogu suurtagashay in aanu sawirradan quruxda badan ka qaadno oo weliba Xamse Jeesto ayaa qaaday.
Waxa aanu dareennay inay muhiim tahay barashada farta suuldhabaalaha ee loo yaqaanno "Sign Language" ee dadka maqalka naafada ahi ku wada xidhiidhaan kuna sheekaystaan.
Sawirka ay igu xoonsan yihiin wuxuu tilmaamayaa sidii ay ugu farxeen sawirro aanu ka qaadnay. Waxaana aan tusayey sawirro aan Ipod-ka kaga qaaday.
Waxaana ardaydani yihiin 11 arday (lix wiil iyo lix hablood) oo maqalka naafo ka ah oo u fadhiistay imtixaanka shahaadiga ah ee Somaliland. Waana tirada ardayda maqalka naafada ka ah ee gobolka Maroodijeex ba sida uu maamulkoodu ii sheegay imtixaanka gashay. Waxaana ay u fadhiisteen imtixaanka dugsiyada dhexe.
Posted by HeersareMuxumed at 1:56 PM
Sidii Aanu Isu Fahannay. Qalinkii: Cabdishakuur He...